သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ – My Doctor
You are here:Home-All Articles-အထွေထွေရောဂါများ-သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ
Can drink vitamins for hypertension?
By tayzar|2019-09-04T16:47:00+00:00September 4th, 2019|Categories: All Articles, Uncategorized, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ, သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ|
သွေးတိုးသမားတွေ အားဆေးသောက်လို့ရရဲ့လား သွေးတိုးသမားတွေ အားဆေးသောက်လို့ရမရ ဆိုတာကိုမပြောခင် အရင် 'သွေးတိုးသမားဆိုတာဘာလဲ' 'အားဆေးဆိုတာဘာလဲ' ရှင်းအောင် အရင်ပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ သွေးတိုးသမားလို့ ပြောရင် နားလည်မှုလွဲနေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ◾အမြဲတမ်းချိန်လိုက်တိုင်း သွေးပေါင်ချိန် '135/85mmHg'အထက်ကိုရောက်နေတဲ့ သွေးကျဆေးအမြဲသောက်ဖို့လိုတဲ့ 'သွေးတိုးရောဂါ'နဲ့.. ◾ဖိစီးမှုတစ်ခုခုကြောင့် ခဏတဖြုတ်တက်ပြီး ပြန်ကျသွားတတ်တဲ့ 'ရောဂါမဟုတ်တဲ့ သွေးတက်ခြင်း' ရယ်လို့ ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်မျိုးလုံးက သွေးတိုးသမားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆတတ်ကြပါတယ်။ 'အားဆေး'ဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။တော်တော်များများတူကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်၊ အာရုံကြောအတွက်၊ ကိုယ်ခံအားအတွက်၊ အမျိုးသားအတွက်၊ အမျိုးသမီးအတွက်၊ လူကြီးအတွက်၊ ကလေးအတွက်..စသည်ဖြင့်ပေါ့ ရည်ရွယ်ချက် မတူတဲ့ အားဆေးတွေမှာတော့ ပါဝင်တဲ့ ဗိုက်တာမင်တွေ သတ္ထုဓာတ်တွေ နည်းနည်းကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးသမားတွေ အားဆေးသောက်လို့ရရဲ့လားဆိုရင်တော့ သောက်လို့ရပါတယ်လို့ပဲ
When can you be said to have hypertension
By tayzar|2019-02-25T09:58:43+00:00February 25th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေရောဂါများ, သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ|
သင့်မှာ သွေးတိုးရောဂါ ရှိနေပြီလား သင့်အနေနဲ့ ဆေးခန်း မှာဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သွေးပေါင်ချိန်ကြည့်တဲ့အခါတိုင်း အပေါ်သွေး ၁၄၀ အောက်သွေး ၉၀ ထက် ကျော်နေပါက သွေးတိုးရောဂါ ရှိနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ် ရက်သတ္တပတ် များစွားကြာအောင် အပေါ်သွေး ဒါမှမဟုတ် အောက်သွေး တစ်ခုထဲသာ ပုံမှန်ထက်များပြားနေပါကလဲ သွေးတိုးရောဂါ ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း သွေးပေါင်ချိန်ပမာဏဟာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တာထက်ပိုများနေတယ် ဆိုပါက ထိုဖိအားဟာ သင့်နှလုံးနဲ့သွေးကြောများအပေါ် သွားရောက်သက်ရောက်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ သွေးတိုးလာပါက နှလုံးရောဂါ လေဖြတ် လေဖြန်းရောဂါ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတာ အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ များလာမှာပဲ
By tayzar|2019-01-17T11:55:01+00:00January 17th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ, သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ|
အသံတိတ် လူသတ်ရောဂါကို ထောက်လှမ်းခြင်း နောက်ပိုင်း ဆရာတို့ဆေးခန်းတွေမှာ သွေးတိုးမျိုးရိုးရှိသူတွေ အဝလွန်သူတွေ အနေနှင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သွေးပေါင်ချိန်တွေ ချိန်ကြည့်လိုက်တိုင်း တအားတတ်လာတာကို တွေ့နေကြပါတယ် သွေးတိုးရှိမှန်းမသိ သူတွေ သွေးတိုးကို သေချာ မကုသသူတွေ လည်း ဒု နဲ့ ဒေး ပါ အဲလိုတွေကြောင့် ဒီစာလေးရေးဖြစ်ပါတယ် သွေးပေါင်ချိန်ဆိုတာဘာလဲ သွေးကြောတွေထဲ လည်ပတ်နေတဲ့ သွေးဖိအားကို ခေါ်ဆိုတာပါ ဘယ်အရွယ်တွေမှာသွေးတိုးတတ်လဲ အများအားဖြင့် ၄၀ကျော်ရင်တိုးတာများပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် လူလတ်ပိုင်းတွေ သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်လာတာကိုတွေ့နေရပါတယ် အဓိက တစ်နေကုန်လှုပ်ရှားမှုမရှိ ညနေဖက် အရက်ဘီယာ စတာတွေပုံမှန် မှီဝဲနေတဲ့သူတွေ အဝလွန်လာသူတွေ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်း တတ်နေတာကို စိတ်မကောင်းဖွယ်
By tayzar|2018-11-28T11:15:00+00:00November 28th, 2018|Categories: All Articles, အထွေထွေရောဂါများ, သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ|
အတွင်းတိမ်နှင့်ရေတိမ် အတွင်းတိမ် (cataracts) နှင့် ရေတိမ် (glaucoma) နှစ်ခုစလုံးသည် မျက်စိအမြင်အာရုံကို ဆုံးရှုံးစေသည့် အခြေအနေများပင်ဖြစ်သည် ။ အတွင်းတိမ်မှာ မနာမကျင်ဘဲ တဖြည်းဖြည်းနှင့် မျက်စိကွယ်လာစေပြီး ရေတိမ်မှာမူ နာကျင်တတ်ပြီး လျင်လျင်မြန်မြန် ဖြစ်ပွားတတ်သလို ဖြည်းဖြည်းနှင့်လဲ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည် ။ အတွင်းတိမ်မှာ မျက်လုံးအတွင်းရှိ မှန်ဘီလူးလေးများ ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် မျက်စိထဲသို့ အလင်း ပုံမှန်အတိုင်း ဝင်ရောက်မှု မရှိတော့ခြင်းကြောင့် တိမ်ကဲ့သို့ဖြစ်လာခြင်းပဲဖြစ်သည် ။ ရေတိမ်မှာမူ မျက်စိအတွင်း ဖိအားများလာကာ အမြင်အာရုံပေးစွမ်းစေသည့် မျက်စိအာရုံကြောမကိုဖိမိကာ ဒဏ်ရာဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည် ။ ရေတိမ်ကြောင့် မျက်စိကွယ်လေ့မရှိသော်လည်း ကွယ်သွားခဲ့လျှင် ပြန်အလင်းမရနိုင်တော့ဘဲ စက္ကုအလင်းဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အတွက် သေသေချာချာ
By tayzar|2018-06-30T09:38:33+00:00June 30th, 2018|Categories: All Articles, အထွေထွေရောဂါများ, သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ|
ရုတ်တရက်သွေးတိုးစေသောအခြေအနေများ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ သွေးတိုးရောဂါအဖြစ်များတဲ့လူတွေအကြောင်း၊ ရုတ်တရက်သွေးတိုးရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကို အဓိကရေးသားဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေမှာ သွေးတိုးနိုင်သလဲ? *အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ သွေးတိုးဖြစ်နိုင်ခြေများလာပါတယ်။ အသက် ၆၄ မတိုင်ခင်မှာ အမျိုးသားက သွေးတိုးပိုအဖြစ်များပြီး အသက် ၆၅ နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမျိုးသမီးက ပိုပြီးသွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ *မိသားစုထဲမှာ သွေးတိုးရောဂါရာဇဝင်ရှိရင်လည်း မိမိမှာသွေးတိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ *ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်များလွန်းပြီး ဝလေလေ တစ်ရှူးတွေဆီကို အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေသယ်ဖို့ သွေးများများလိုလေလေပါပဲ။ သွေးပမာဏများလာတဲ့အခါမှာ သွေးကြောနံရံတွေပေါ်ကို ဖိအားတွေများလာပြီး သွေးတိုးနိုင်ပါတယ်။ *ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီးသောက်တဲ့အခါ ပါဝင်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေက သွေးကြောနံရံတွေကိုဖျက်ဆီးပါတယ်။ သွေးကြောနံရံတွေကျဉ်းလာတဲ့အခါမှာ သွေးတိုးရောဂါနဲ့အတူ နှလုံးရောဂါပါဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဆေးလိပ်မသောက်ရင်တောင် တစ်ဆင့်ခံရှူရှိုက်ရရင်လည်း ဆေးလိပ်သောက်တဲ့လူကဲ့သို့ ရောဂါရနိုင်ပါတယ်။ *စားသောက်တဲ့အစားအစာမှာ Sodium (ဆားဓာတ်)အငန်ဓာတ်ပါဝင်မှုများရင် ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ရေဆွဲထားပြီး
By tayzar|2018-06-15T11:56:13+00:00June 15th, 2018|Categories: All Articles, အထွေထွေရောဂါများ, သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ|
သွေးတိုးဟာ မျိုးရိုးလိုက်သလား? မိသားစုဝင်များဟာ မျိုးရိုးဗီဇတွေတူတတ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ အမူအကျင့်တွေတူညီတတ်ပါတယ်။ နေထိုင်မှုပုံစံ၊ စားသောက်မှုပုံစံ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် စတဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ်ကိုသက်ရောက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေလည်းတူညီတာကြောင့် ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ချေကလည်း တူတတ်ပါတယ်။ သင့်မိသားစုထဲမှာ သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့သူတစ်ဦးပါတယ်ဆိုရင် အထက်ပါအချက်တွေကြောင့်အပြင် သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်၊လူမျိူးစတဲ့ အချက်တွေအပေါ်လည်းမူတည်ပြီး သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ မျိုးဗီဇနဲ့ မိသားစုရဲ့ရောဂါရာဇဝင် မိသားစုဝင်များဟာ မျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုကို ဗီဇတွေလက်ဆင့်ကမ်းလေ့ရှိပါတယ်။ မျိုးဗီဇဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုဟာ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ အခြားဆက်စပ်သောရောဂါများမှာလည်း အနည်းငယ်ပါဝင်နေပါတယ်။ တကယ်ကတော့ မိသားစုထဲမှာ သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ အဲဒီမိသားစုဝင်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေ တူညီနေတယ် မျှဝေနေပြတယ်ဆိုတာကြောင့် သူ့မှာလည်း သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိလာတာမျိုးပါ။ မိသားစုထဲမှာသွေးတိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်အချိန်မှာ သူလည်းရောဂါပိုဖြစ်နိုင်မလဲလို့မေးရင် သူ့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံမကောင်းမွန်တာ (Unhealthy lifestyle) နဲ့
By tayzar|2018-06-06T16:34:15+00:00June 6th, 2018|Categories: All Articles, အထွေထွေရောဂါများ, သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ|
သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိသူများ သွေးတိုးရောဂါဆိုတာ ခုခေတ်မှာ အဖြစ်များတာနဲ့ အမျှ လူတိုင်းမဖြစ်ချင်ကြတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ ခုဆောင်းပါးမှာတော့ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေအကြောင်းကို ရေးသားချင်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေထဲမှာ စာဖတ်သူသာပါနေခဲ့မယ်ဆိုရင် သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို သိရှိပြီးတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ အချက်တွေကို ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့ အချက်များကတော့ (၁)အသက် အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ သွေးတိုးဖြစ်နိုင်ခြေများလာပါတယ်။ အသက် ၆၄ မတိုင်ခင်မှာ အမျိုးသားက သွေးတိုးပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အသက် ၆၅ နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမျိုးသမီးက ပိုပြီးသွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ (၂)လူမျိုး သွေးတိုးရောဂါဟာ လူဖြူတွေထက် African လူမျိုးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ သွေးတိုးခြင်း၊ရုတ်တရက်လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးဖောက်ခြင်း၊ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့ဟာ African လူမျိုးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ (၃)မိသားစုထဲမှာ သွေးတိုးရောဂါရာဇဝင်ရှိရင်လည်း မိမိမှာသွေးတိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (၄)အဝလွန်ခြင်း ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်များလွန်းပြီး ဝလေလေ
Hypertension and Drug Compliance
By tayzar|2018-05-17T14:51:31+00:00May 17th, 2018|Categories: All Articles, အထွေထွေရောဂါများ, သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ|
* သွေးတိုးမှ ဆေးသောက်လိုက်တယ် ဆရာမ * ပုံမှန် ကြားနေကျ စကားဖြစ်သည်။ ထိုသို့ကြားရတိုင်းလည်း စိုးရိမ်စိတ်က ပေါ်စမြဲ။ သွေးတိုးရောဂါသည် အမြစ်ပြတ် ပျောက်တတ်ပါသလား? မပျောက်တတ်ပါ။ သွေးတိုးရောဂါ၏ ၈၅ရာနှုန်းသည် အသက်ကြီးလာ၍ သွေးကြောများ တောင့်တင်းလာရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါဖြစ်သဖြင့် အသက်ကြီးလာသူ တော်တော်များများ သွေးတိုးလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းသော သွေးတိုးဆိုသည်မှာ အခြားရောဂါကြောင့် သွေးတိုးနေသော ကျန်၁၅ရာနှုန်းသော သွေးတိုးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သွေးတိုးတိုင်း ဆေးသောက်ရသလား? အသက်ကြီးသူတိုင်း သွေးပေါင် တက်လာတတ်ကြသော်လည်း သတ်မှတ်ထားသော သွေးပေါင်ချိန်မရောက်လျှင် ဆေးသောက်ရန် မလိုပါ။ သင့်တင့်မျှတသော လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အငန်လျော့စားခြင်းဖြင့် ထိန်းညှိနိုင်ပါသည်။ သွေးတိုးမှ ဆေးသောက်ရသလား?
နှလုံးရောဂါ စရှိပြီဆို ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်သလဲ
By tayzar|2018-04-25T14:43:56+00:00April 25th, 2018|Categories: All Articles, အထွေထွေရောဂါများ, သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ|
နှလုံးရောဂါ စရှိပြီဆို ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်သလဲ သင်ဟာ အသက်လတ်ပိုင်းကျော် ၅၀နားကို ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင် နှလုံး သွေးတိုး ဆီးချိုဆိုတဲ့ အတွဲကတော့ သင့်ထံလာဖို့ ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ ဒါလေးတွေ သတိထားပါ! ၁။ အစားအစာ သွေးတိုးရှိတိုင်းလည်း ဆားဘာမှ မစားပဲ အငတ်ခံပြီး နေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအစားအစာ တော်တော်မျာများဟာ အငန်ဓာတ်ကဲပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင် အငန်လျော့စားပါ။ နေ့တိုင်း အပြင်စာ မစားပါနဲ့။ အသီးအရွက် များများစားပေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ၂။ လေ့ကျင့်ခန်း လေ့ကျင့်ခန်းဆိုလို့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အားကစားသမားတွေလို အပြင်းအထန် မလုပ်ခိုင်းဘူးနော်။ အိမ်ထဲမှာတင် နေ့တိုင်း ၁၀မိနစ်လောက် ပတ်လျှောက်နေလည်း လေ့ကျင့်ခန်းပါပဲ။ ၃။